20 Vavaky ny ady ara-panahy ho an'ny fanemorana sy ny fahasosorana | FIVAVAHANA VAVAKA
Alahady, Septambra 26, 2021
Home Teboka am-bavaka 20 Vavaky ny ady ara-panahy ho an'ny fanemorana sy ny fahasosorana
20 Vavaky ny ady ara-panahy ho an'ny fanemorana sy ny fahasosorana
2 Korintiana 6:2:
2 (fa hoy izy: Efa reko taminao tamin'ny fotoana ankasitrahana, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao; indro, izao no fotoana ekena; indro, ankehitriny no andro famonjena.)
Mivavaka aho ho an'izay rehetra mamaky izao, anio no andron'ny famonjena, anio dia Ilay Andriamanitry ny lanitra dia handringana ny rehetra toe-tsaina fanemorana sy fahasosorana amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Androany isika dia hanao vavahady ady ara-panahy 20 hanohitra ny fanahin'ny fahatarana sy ny fahasosorana. Tsy misy mahasosotra ny fiainana toy ny fahatarana. Ny baiboly dia milaza fa rehefa ahemotra ny fanantenanao dia maharary ny fo izany, Ohabolana 13:12. Tsy ny fanemorana rehetra no ratsy, indraindray isika mila maneho faharetana mandra-pahazoantsika ny fampanantenan'Andriamanitra, Heb. 6:12. Nefa tsy mijery an'izany karazana fiandrasana izany isika anio, fa mijery ny karazana fahatarana ateraky ny herin'ny demonia avy any amin'ny helo, rehefa manandrana manelingelina anao ny devoly amin'ny fijanonanao mankany amin'ireo zava-bitanao. Zanak'Andriamanitra, raha tsy manohitra ny devoly ianao dia azo antoka fa hanohitra anao ny devoly. Mba handresenao ny fanemorana amin'ny demonia dia tsy maintsy miditra ianao vavaka amin'ny ady ara-panahy. Tsy maintsy miady amin'ny devoly amin'ny alin'ny vavaka ianao.
Ao amin'ny Daniela 10: 13-21, dia hitantsika ny fomba nitondran'ny printsin'i Persia ny vavak'i Persia, ny fahefana faritany mifehy an'i Persia. Ny fanirian'ny fon'i Daniel dia nahemotra nandritra ny 21 andro, isaorana Andriamanitra tsy nilavo lefona tamin'ny vavaka nataony i Daniel. Raha tsy nivavaka intsony i daniel dia ho voatazona mandrakizay ny valinteniny. Kristiana marobe ankehitriny, tsy manana fikirizana amin'ny vavaka, mora loatra izy ireo ka tsy kivy amin'ny alitaran'ny vavaka, hoy i Jesosy ao amin'ny Matio 7: 7, mangataha, dia ho azonao , ny dikan-nohamafisina nampidirina 'manontany ary manontany foana' ao amin'ny Lio 18, Jesosy dia nizara fanoharana iray momba ny mpitondratena iray izay nahazo ny fangatahany avy amin'ny mpanjaka noho ny fikirizany. Tsy fantatro izay tara amin'ny fiainanao anio, mety ho fanambadiana, zanaka, asa, fanasitranana, asa ary fandrosoana amin'ny fandraharahana sns mamporisika anao aho tsy hiala amin'ny Andriamanitra, miady amin'ny ady tsaran'ny finoana, miorena tsara ny alitara fivavahana ary mivavaha amin'ny lalan'ny fijoroanao ho vavolombelona. Ny vavaka ataoko ho anao dia izao, rehefa manao an'ity vavaka ady ara-panahy ity ianao manohitra ny fanahin'ny fahatarana sy ny fahasosorana, dia tsy hisy fahatarana intsony eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Ny fahefana rehetra, manalava ny diako mankany amin'ny zava-mahadomelina, dia miankohoka ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Ny olana rehetra, izay nataoko teo amin'ny fiainako tamin'ny alàlan'ny fiarahako tamin'ny fanahin'ny fahatarana sy ny fahasosorana dia maty ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Hanafoana ireo hetsika sy herin'ny fanahin'ny fanemorana ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Nofoako ny fanekena sy ny fanozonana ny fanahin'ny fanemorana ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Ny vokatry ny fanahin'ny fanemorana ny fiainako dia hohamaivanin'ny ran'i Jesosy.
6. Ny fanahy ratsy rehetra sy ny lamosin'ny fiainako dia mandray ny afon'Andriamanitra ankehitriny ary ho ringana amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ny fanahy rehetra, manakana zavatra tsara eo amin'ny fiainako, ho fongana, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Tompo ô, mandà ny fitahiana ankavia aho.
9. Amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy hiala amin'ny fitoeram-pako fako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Tsy mandà fitahiana tsy misy tombony aho amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Ny fanahy rehetra tezitra amin'ny fiainako, hosasana amin'ny ran'i Jesosy.
12. Izaho dia mandà ny toe-tsaina matahotra, tebiteby ary, fahakiviana, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ny torolàlana ratsy rehetra, ny faminaniana na ny faminaniana rehetra, navoaka amin'ny fiainako misy akorandriaka, dia foanana amin'ny ran'i Jesosy.
14. Izaho ilay mandà ny fanahin'ny rambony; Izaho kosa mitaky ny fanahin'ny lohany, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Mahazo fitateram-panjakan'ny anjely ho any amin'ny toerana tian'Andriamanitra hataoko aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Ny fitotoana ratsy rehetra eo amin'ny fiainako vokatry ny fihinana moka, hosasana amin'ny ran'i Jesosy.
17 Ry Tompo, ampio aho amin'ny fahalehibiazanao toy ny nataonao tamin'i Daniela tany amin'ny tanin'i Babylona.
18. Izaho dia mandà ny fitahiana mangatsiaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Izaho dia mandà ny toe-tsaina feno loatra loatra, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Ry Ray masina, avelao ny fahavaloko rehetra sy ny mandany mafy, hotapatapahina amin'ny kotrokotr'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy
Previous lahatsoratraZava-bavaka mavitrika ho an'ny fankasitrahan'Andriamanitra
Next lahatsoratraVavaka hanoherana ny fanahin'ny fahalotoana
Sia Matta Tumoe 23 aprily 2019 Amin'ny 4:38 maraina
Ny fahatarana rehetra dia efa cacell amin'ny anaran'i Jesosy I ary ny ankohonako dia maimaimpoana ao amin'i Jesosy Anarana Amen Mieritreritra aho fa Tompoko
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum 23 aprily 2019 Amin'ny 5:02 maraina
Amena dia ho eo amin'ny fiainanao sy ny fianakavianao amin'ny anaran'i Jesosy izany
Frances 12 septambra 2019 amin'ny 10:31 maraina
Io toe-tsaina fanemorana sy fahasosorana eo amin'ny fiainako io, ny fanambadiako sy ny ankohonako, hanafoako azy io ary avelako tsy manan-kery amin'ny alàlan'ny ra ao amin'i Jesosy Kristy
Fivoarana Efiba 13 septambra 2019 amin'ny 10:12 hariva
Misaotra anao Andriamatoa tamin'ny haleham-bavaka mahery dia mino aho fa ringana amin'ny anaran'i Jesosy ny hery rehetra fanemorana.
Fivoarana Efiba 13 septambra 2019 amin'ny 10:14 hariva
Misaotra anao Andriamatoa tamin'ny haleham-bavaka mahery dia mino aho fa ringana amin'ny anaran'i Jesosy ny hery rehetra fanemorana
Evang Chukwuedon Andrew 17 Oktobra 2019 Amin'ny 4:54 hariva
Andriamanitra anie hitahy anao tompoko noho ity foto-bavaka mahafinaritra ity.
Hatramin'izao dia azoko ny fahafahako amin'ny fahatsapana fanemorana sy ny fahasosorako ao amin'i Jesosy anarana amena
Esuru Daniel 14 Novambra 2019 Amin'ny 8:12 maraina
Ny fanahy rehetra amin'ny fanemorana sy ny lamosina dia esorina amin'ny fiainako amin'ny anarana raha toa ka i Jesosy. Amen
Ezema Edith Amuche 26 Febroary 2020 Amin'ny 11:48 maraina
Laviko ny tara-panambadiana rehetra amin'ny fiainako… Mila mpiara-miasa tsara aho hanangana trano mahafinaritra miaraka amiko
Manandrama Linus Murithi Ndwiga 29 Mey 2020 Amin'ny 9:48 hariva
Hotahin'Andriamanitra anao be dia be tsy mivadika amin'Andriamanitra. Misaotra. Rava tanteraka ny fahatakarana ny fampiroboroboana ahy.
Jasintha Jiona 19, 2020 Ao amin'ny 7: 25 am
Amena, mahazo fanavotana amin'ny fanahy rehetra miverina aho, mavesatra ary fetra, amin'ny anarana mahery an'i Jesosy ary misaotra an'Andriamanitra noho izany aho. Amena sy Amena.
Mabel 9 Jolay 2020 Amin'ny 12:58 maraina
Ity vavaka ity dia tena manampy ahy anio hariva, nitebiteby aho ary nieritreritra ny fiainako taorian'ireto vavaka ireto, mitahy aho Andriamanitra mitahy anao lehilahin'Andriamanitra 🙏🙏🙏
Taofiq Adeniyi 9 Jolay 2020 Amin'ny 3:27 maraina
Kivy be aho ka tsy maintsy mandeha an-tserasera mba hisaotra ny vavaka ary nifanatrehana ireo vavak'ireo vavaka nataonao. Nivavaka sy resy lahatra aho fa ren'Andriamanitra ny vavaka nataoko. Misaotra anao Andriamatoa tamin'ny vavaka fanentanam-panahy.
TheOrdainedOne Oktobra 26, 2020 Ao amin'ny 10: 19 am
Toheriko ny fanahin'ny fahatarana, ny fetra ary ny fihemorana amin'ny anaran'i Jesosy
Raisiko ny fitahian'Andriamanitra sy ny drafiny ho an'ny fiainako feno amin'ny anaran'i Jesosy
Izaho no lohany fa tsy rambony, raisiko ny fahefana sy ny hery miverina amin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy, miaina amin'ny fanahy mahery amin'ny anaran'i Jesosy aho
Ny Fijoroako ho vavolom-panahy dia sehatra ara-panahy, asehoko amin'ny nofony amin'ny anaran'i Jesosy izany
Émile Konan Fréjus 1 Febroary 2021 Amin'ny 12:52 alina
PA Cumberbatch 4 Febroary 2021 Amin'ny 5:39 alina
Misaotra anao lehilahin'Andriamanitra, noho ny vavaka mahery sy ny fanambaràna ho fahatarana sy fahasosorana amin'ny fanahy; fa tsy noeritreretiko akory ny hanao herisetra amin'ireo fanafihana ataon'ny demonia manodidina ny fahasosorana sy ny fahatarana amin'ny fiainana tato ho ato. Nofoanako ny fanahin'ny fahasosorana rehetra sy ny fahatarana tonga amin'ny vadiko, ny zanakay, ny zafikelinay ary ireo fianakaviana izay mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ho mpamonjy anao manokana. Tsy nihemotra intsony ny fanemorana ny olon-drehetra ary izay rehetra mifandray dia hameno ny tanjon'izy ireo; fanahy, fanahy, vatana ary ho afaka hanatanteraka ny sitra-pon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Nazareta Tompo sy Mpamonjy amin'ny alàlan'ny Fanahiny Masina; Amena
Marta 27 Febroary 2021 Amin'ny 3:37 maraina
Amena, mahazo famerenana amin'ny laoniny amin'ny fiainako aho, nanampy ahy tokoa io teboka vavaka io, misaotra ilay lehilahin'Andriamanitra
TK 23 martsa 2021 Amin'ny 6:43 hariva
Tena mivavaka tokoa ny vavaka mahery. Mandà ny fanahin'ny fahatarana amin'ny fiainako amin'ny Anaran'i Jesosy aho. AMEN! Misaotra pastera
Doreen 13 aprily 2021 Amin'ny 6: 00 hariva
Mandà ny fanahin'ny fahatarana amin'ny fiainako aho ary mahazo famerenana amin'ny laoniny amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Amena
Ed 19 aprily 2021 Amin'ny 11:22 maraina
Joan, 25 Mey 2021 Amin'ny 11:37 maraina
Edith Jiona 13, 2021 Ao amin'ny 1: 04 am
Misaotra lehilahin'Andriamanitra noho ireo fanambarana ara-paminaniana ireo.
Kelvin 4 Jolay 2021 Amin'ny 1:17 maraina
Mamatotra sy mandroaka ny fanahy ratsy rehetra amin'ny fanemorana amin'ny anaran'i Jesosy Amena aho.
Biji 15 Jolay 2021 Amin'ny 9:35 maraina
Misaotra lehilahin'Andriamanitra tamin'ny vavaka. Ao anaty krizy ara-bola aho. Tsy manana trano hipetrahana miaraka amin'ireo zanako telo. Tsy misy olona hikarakara. Mivavaha ho ahy koa.
Nelly Ohia 13 septambra 2021 amin'ny 7:05 maraina
Ny fanemorana dia nofoanana tanteraka amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesoa Kristy amena amena
Olumofin Magdalene 13 septambra 2021 amin'ny 10:27 hariva
Misaotra anao lehilahin'Andriamanitra tamin'ny vavaka mahery 🙏🙌
Teboka vavaka hanoherana ny fahakiviana
Oktobra 27, 2020
Teboka vavaka mahery vaika hampihenana ny fahavalonao
NY BAIBOLY NY BAIBOLY MOMBA NY FANAVAOZANA